Best XRP mgbanwe
Ahịa ahia kacha mma XRP $ 0.702345 XRP/ZAR Altcoin Trader
Ihe kachasị mma XRP bụ ihe kachasị mma ịzụta ma ọ bụ nke ọnụahịa dabere na nsonaazụ nke ụzọ abụọ ego ego na-agbanwe. Ọnụego mgbanwe ego ego XRP nke banki adighi atọrọ ka ọ dị na ego mbu, kama ọ bụ kpebisiri ike maka azụmahịa ọ bụla n'etiti ndị sonyere mgbanwe ahụ. Na mgbanwe ego ego ọ bụla, nguzozi nke ndi na-azu ahia na ndi na ere ahia nke XRP dị iche. Ya mere, mgbanwe ego ego XRP ọnụego mgbanwe bụ n'otu n'otu na mgbanwe ego ego ego ọ bụla.
Best XRP obere akpa
Ka 28, 2020 Kachasị mma ịzụta XRP na Ka 28, 2020 Ọnụ ahịa kacha mma XRP na $ sell_pair ụzọ azụmaahịa na $ sell_market ahịa.
Mpempe akwụkwọ kachasị mma XRP bụ echiche mmadụ n'otu n'otu maka onye ọ bụla nwe ego ego. Mpempe ego crypto nwere parampat dị mkpa: ịdị mfe nchekwa, ntụkwasị obi. Ejiri ezigbo mgbanwe ego ego XRP n'oge ahọpụtara site na ịmụ nsonaazụ nke ọnụego azụmaahịa maka ịzụta na ire nke ego ego. Anyị na-amụ ahịa XRP ahịa mgbanwe ego ego ego, anyị wee họrọ azụmaahịa kachasị mma maka ịzụ na ire.
Ụlọ ahịa XRP kacha mma
Ọ bụ ihe ezi uche dị na iche na ọ bụrụ na nso nso a na mgbanwe e nwere ọnụahịa zụrụ nke XRP, mgbe ahụ ọ bara uru ịchọ ọnụego mgbanwe kacha mma na mgbanwe ego ego a. Kachasị mma XRP ịzụta na ire ọnụ ahịa maka taa bụ 28/05/2020 n'isi nke ibe. Ihe ndekọ ntanetị "Kasị mma XRP maka taa 28/05/2020" na-enyocha ọnụego ego ego kachasị mma na ntanetị. XRP ọnụahịa zụrụ ahịa kachasị mma - anyị na-egosi na dollar n'agbanyeghị ego ejiri zụọ ahịa azụmaahịa ahụ.
BTC USD USDT ETH EUR KRW TRY JPY INR CNY UAH RUB ETC LTC QAU BRL IDR BNB XLM CKUSD THB AUD MXN PLN ZAR CAD Ọzọ ...
Tebụl na-egosi taa ọnụahịa XRP nke ọ bụla site na netwọk ego ego. A gbanwere ọnụego mgbanwe maka ọnụọgụ abụọ abụọ na dollar US.
Ihe kachasị mma XRP ọnụego ịzụta nwere ike ọ gaghị adị na dollar, mana iji ego dị iche ma ọ bụ ego ego. Anyị na-egosipụta oge kacha mma XRP ọnụego zụta nke dollar maka ntụnyere dị mfe. Anyị na-egosikwa ụdị ego a ga-eji zụta XRP. N’akụkụ ọnụ ahịa ire ahịa nke ego ego ị ga - ahụ ụzọ njikọ n’ahịa mgbanwe nke XRP na - ere kacha mma.
Ọzọkwa, ibe anyị na-enye ozi gbasara ego a ga-ere XRP. Ngosiputa ahia ahia kacha mma maka ire ma obu izu XRP egosiputara na peeji a. Jiri nyo nke ego dị iche iche dị na tebụl nke mgbanwe ego ego kachasị mma iji hụ XRP maka ego achọrọ ma ọ bụ ego ego chọrọ. A na-emelite ozi na weebụsaịtị anyị gbasara mgbanwe kacha mma maka ịzụta ahịa na ịre ahịa XRP